Ngokwezibalo, njalo ngonyaka kuba neziguli ezihlaselwa isiguli ezi-1,2-1,8 million, ezingama-400000-800000 ngonyaka zokufa kwabantu kanye nezinga lokukhubazeka elingu-86,5%. Ngokwezibalo zabanye izifundiswa, phakathi kweziguli ezisindile ezinesifo sokuwa, ama-10% abuyiselwe emsebenzini ngaphandle kokukhubazeka okusobala, ama-40% ashiye ukukhubazeka okuncane, ama-40% adinga usizo lwemishini ekhethekile, kwathi u-10% wadinga ukunakekelwa okukhethekile. Zonke izinhlobo ze-hemiplegia ezibangelwa yisifo sohlangothi ziyi-sequelae evame kakhulu. Uma zingelashwa ngesikhathi, okukhanyayo kuzoshiya ukukhubazeka, okuzoba nomthelela omkhulu empilweni yabo nasemsebenzini. Abasindayo ngeke bakwazi ukunakekela impilo yabo, hhayi nje ukuthi bahlupheke, kodwa futhi bathwale umthwalo omkhulu emindenini yabo. Ngemuva kokuvuselelwa kabusha, i-90% yeziguli ze-hemiplegic zingaphinde zihambe futhi zizinakekele, ezingama-30% wazo ziqhubeke nomsebenzi. Kuyadingeka ukwenza ukuqeqeshwa kokubuyela esimweni eselaphekile ekwelashweni. Ngenxa yokugcwala kohlelo lwezinzwa oluyinhloko, yize izinzwa zingakwazi ukuphinda zisebenze, izinzwa zakhona eziphefumulayo zingaqhakaza ngamagatsha akwi-axon, angenza izicubu zomzimba ezisondelene nazo ziphinde zilawule, ziqoqe amandla angaphakathi omzimba, futhi zikhuthaze ukuphindwaphindwa komsebenzi wezinzwa. Ngaphezu kwalokho, ukuqeqeshwa kokululama okuhamba kungavusa umdlandla weziguli futhi kuthuthukise ukuzethemba kwabo kokululama. Abahamba ngezinyawo ikakhulu esingabanikeza njengoba,
Silinde izindaba ezivela kuwe futhi sizozama konke okusemandleni ukuhambisa noma yiluphi ulwazi oludingayo.
Futhi, sethemba ukuthi sonke singakwazi ukuthuthuka ngale mikhiqizo futhi sethemba ukuthi ungathola amasheya amaningi emakethe yakho.